प्रकाश दाहालको सेल्फी ‘विथ’ देवी ज्ञवाली -
प्रकाश दाहालको सेल्फी ‘विथ’ देवी ज्ञवाली
१२ कार्तिक २०७४, आईतवार १९:५७ 557 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १२ कात्तिक । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र प्रचारमा रहेको तस्बिर हो, प्रकाश दाहालको सेल्फी ‘विथ’ देवी ज्ञवाली ! जुन तस्बिरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन् । यो तस्बिरको आन्तर्य अब चितवनमा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यको दिशानिर्देश गर्नका लागि देवी एउटा अचुक पात्र हुन् । धेरैले बधाई दिएका छन्, कतिपयले कटाक्ष गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए, देवी । जसको जितको संघारमा मतपत्र च्यातियो र एमाले–माओवादीमा देशभर पानी बाराबारको अवस्था पनि आएको थियो । कांग्रेसलाई उपयोग गरेर मेयरमा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन सफल भएका प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्नासाथ आक्रोशित एमाले कार्यकर्तालाई खुशी बनाउने अर्को रणनीति बन्यो, बामपन्थी गठजोड । जसको नेतृत्व प्रचण्ड आफैंले गरे र भने– मैले भनेको थिएँ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । हरेक चमत्कार हुन सक्छ ।
यसले कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूबीचको अमिलोपनलाई मधुरसमा बदल्यो । धेरैले प्रचण्ड थैवहरूको हत्याको बदलामा प्रचण्डको जीतलाई आत्मसाथ गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन स्पर्धामा एउटा कठोर विरोधी दल बनेको माओवादीलाई अब एमालेहरूको बहुमत सहयोग र मत खसाल्ने जिम्मेबारी पनि आएको छ । त्यसैका लागि पनि देवी ज्ञवाली अब पराजयको तितोपनलाई छिचोल्दै प्रचण्ड विजयको मधुमासमा रमाउने जिम्मेबारीमा उत्रिएका छन् । कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने भनिएको बजारहल्लालाई शान्त पार्दै देवीले भनेका छन्,‘यो हल्लाको पछि नलागौं, म एमालेको सिपाही हुँ । प्रचण्डलाई जिताउने जिम्मेबारी मैले लिएको छु ।
बामपन्थी गठजोडको एउटा चमत्कारका कारणले नै देवी ज्ञवाली प्रचण्डका सेनापतिका रूपमा उभिएका छन् । उनलाई मेयरको पराजय भन्दा प्रचण्डको विजयको सुनिश्चितता गर्ने चिन्ता छ । त्यसैले घर पुगेका प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै उनको आश्वासन थियो– तपाईलाई चुनाव जिताउने काम मेरो, म तपाईको सच्चा सेनापति बन्न तयार छु !
प्रचण्डले चितवन–३ मा एमालेको बुई चढेर एउटा जुवा खेलेका छन् । जसमा कुनै पनि दाउको जित प्रचण्डसँग नै सुरक्षित हुनेछ । आफ्ना भाई नारायण दाहालको कमाण्ड भएको जिल्लामा उनले देवीको साथलाई भयानक आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गर्दै चुनाव जिताउने जिम्मा पनि दिएका उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।
चितवनको अमिलोपन प्रचण्डले राजधानीमा गुलियो बनाइदिए । असलमा देवी केपी शर्मा ओलीका एउटा सिपाही हुन् । ओलीका सिपाहीलाई एक्कै पटक प्रचण्डले सेनापति बनाईदिएका छन् जसका कारणले पनि राजनीतिलाई रणनीतिको भुङ्ग्रोमा राख्न उनी सिपालु छन् भन्ने सबुत फेला पर्छ । चुनावी मैदानमा अब अवसर नपाएपनि छोटो समयमा चितवन र देशभर चर्चा कमाउन सफल देवीले प्रचण्डलाई जिताउनका लागि ठूलो योगदान गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले एकीकरणको अन्तिम चरणमा समेत पुगिसकेको माओवादी–एमाले गठजोडमा देवीको बलियो स्थान सुरक्षित पार्ने जिम्मा प्रचण्डले लिइसकेका छन् । झापाका ओली भन्दा चितवनका प्रचण्डकै काखमा देवीले राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने अभियान पनि थालिसकेका छन् ।